ब्यंग्य: खनिया, खनाल र खरेलको तेहरी - Jhilko
ब्यंग्य: खनिया, खनाल र खरेलको तेहरी
त्रिविका उपकुलपति तिर्थ खनियाले पत्रकारिता विभाग प्रमुख चिरञ्जीवी खनाललाई बोलाएर भने, ‘लु आमसञ्चार पत्रकारिताको पाठ्यक्रम देखाऊ त । स्नातकोत्तरसम्मकै ।’
विभागीय प्रमुख चिरञ्जीवी खनाल अत्तालिँदै बोल्न थाले, ‘किन र हजुर ? के भो र ?’
खनिया एक्कासी पत्रकारिता विभाग प्रमुख खनालमाथि खनिए, ‘के भो भन्नु, हुर्मत गयो मेरो । कस्ता कस्तालाई विभागीय प्रमुख बनाइएछ । प्राज्ञिक जिम्मा दियो उल्टोपाल्टो काम गर्नेबाहेक कसैलाई चासो छैन । यसै त हाम्रो विश्वविद्यालयलाई बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना भनेर आरोप लागिरहेको छ । त्यसमाथि पनि राज्यको चौथो अङ्ग उत्पादन गर्ने शिक्षा पनि सुलिफ्याँत भएपछि के हुन्छ ? त्यसैले पत्रकारिताको पाठ्यक्रम (सिलेबस) लिएर मेरोमा हाजीर होऊ भन्या ।’
प्रमुख खनाल सिलेबसको ढड्डा लिएर खनियाको शैक्षिक खर्कमा हाजिर भए र सिलेवसको संक्षिप्त जानकारी दिँदै बोल्न थाले, ‘पत्रकारिताको हाम्रो पाठ्यक्रम दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उम्दा छ । हाम्रो पाठ्यक्रमको कारण एकसे एक पत्रकारहरु उत्पादन भैरहेका छन् । हाम्रो विभागले अब हाम्रा पत्रकारलाई निर्यात गर्न लायक बनाएको छ । यसो गरियो भने रेमिण्ट्यान्समा थप योगदान हुनेछ ।’
‘भाँडमा जाए तिम्रो सिलेबस । तिम्रो सिलेबसले फुलो परेको पत्रकार मात्र जन्माउँदो रैछ । अस्ति मैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरस्वतीको मन्दिर उद्घाटन गर्न सवारी गराउँदा हिलो भएकोले रातो प्लाइउडमा हिँडाएको थिएँ । रातो कार्पेट हिलोमाथि ओछाएर हिँडायो भनेर पत्रकारले लेखे । रातो प्लाइउड र कार्पेट पनि छुट्याउन नसक्ने तिनका आँखा फुलो परेको रैछ । यसमा अरुलाई दोष दिएर भएन, आफ्नै शिक्षा पद्धतिको दोष देखेर तिम्लाई चैनेजो पष्टीकरण सोधेको हुँ ।’ एकै सासमा खनियाले खनालको झाँको झारे ।
खनाल पनि के कम उनले आफ्नो पालामा सिलेबस नबनेको पष्टीकरण दिँदै भने, ‘सिलेबस त पीआर खरेलले बनाएको हो । पत्रकारिताको ठूलो प्रोफेसर हुँ भनी पल्टिन्थे । उनैले बनाउँदा यस्तो दुर्घटना भएको हुनसक्छ भन्ने मलाई पनि लाइरा’छ ।’
‘त्यो पीआर चैं कहाँ छ आजकाल ? लालबाबु पण्डितलाई भनेर भए पनि त्यसको पिआर खोस्नु पर्ने भो’, खनियाले पोख्नुसम्म रिस पोखे ।
‘हैन उनको नाम चैं छोटकरीमा पीआर लामकरीमा पर्शुराम खरेल हो । पीआर लिएको नलिएको भने मलाई थाहा छैन ।’ खनालले प्रस्ट्याए ।
खनियाले आफ्नो अज्ञानता छोप्न टाउको हल्लाए । बुझेबुझेजस्तो पनि गरे ।
‘त्यो पर्शुराम भन्ने अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गनतन्त्रको पक्षमा छैन । पश्चगमनतिरकै मान्छे हो रे भन्ने सुन्या’छु । यसैले यो परिवर्तनलाई कुहिँढ्याक बनाउन त्यस्तो सिलेबस बनाएको हुन सक्छ । गनतन्त्रमा पत्रकारलाई रतन्धो बनाइदिने वा आँखामा फुलो पारिदिने राष्ट्रघाती, गैरप्राज्ञिक काम गरेछ भन्ने अहिले आएर मैले बुझें’, खनियाले अलिक लामो सास फेरे ।
‘अब के गर्नु प¥यो हजुर ?’ विभागीय प्रमुख खनालले नम्र निवेदन गरे ।
‘खरेलसँग सम्पर्क गर्नुप¥यो । गुठी विधेयक फिर्ता गरेजस्तै पहिलेको पाठ्यक्रम फिर्ता लिनु प¥यो । खरेलले बनाएको पाठ्यक्रमबाट पास भएका पत्रकारको हातकलम गर्नु प¥यो । तिनको सर्टिफिकेट रद्द गर्नु प¥यो’, खनियाले निर्देशन जारी गरे ।
‘यो त हुन सक्तैन होला हजुर । लहरो तान्दा पहरो गर्जन सक्छ । सुरेन्द्र कोइरालालाई ६ अङ््क ल्याएकोमा त्यसको पछाडि ० (सुन्ना) अङ्क थपेर स्वर्ण पदक दिएको कुरा फेरि उत्ताउलो गरी निस्कन्छ । थेसिस सारासार गरेको, विक्रीवितरण भएको चर्को कुरा उठ्न सक्छ’, खनालले
निरीहता प्रदर्शन गरे ।
‘के गर्ने त ?’ खनियाले थोरै सुझाव माग्न खोजे ।
अब यो पश्चगमनतिरै ढल्कँदैछ लोकतन्त्र । लोकतन्त्र विस्थापित भएर पर्जातन्त्र स्थापित हुन खोज्दैछ । संघीयता सेण्टीफ्ल्याँट होलाजस्तै छ । गनतन्त्र खै के खै के भैरा’छ । यस्तो बेलामा बहती गंगामा हात धुनु राम्रो हुन्छ । विग्रेको विश्वविद्यालयको भत्केको घर भत्केपछि के को डर ? जता भत्क्यो त्यतै दैलो । कि कसो ?
महिनावारी हुँदा प्रयोग हुने मेन्स्ट्रुअल कप कसरी प्रयोग गर्ने ?
बीस वर्षपछि यसरी समातिए हत्याका अभियुक्त
अमेरिका कोरोनाको अर्को 'केन्द्रबिन्दु' बन्दै, बुलेट ट्रेन...
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अर्को महिना अमेरिका व्यापारका लागि खुला हुने आशा व्यक्त...
एकैचोटी धेरै स्थानको एनसेल टावरमा आगजनी
अज्ञात समूहले टावरमा आगजनी गरेको
जंगलको आगो निभाउँने क्रममा तीनको मृत्यु
जङ्गलको आगो घरमा आउन थालेपछि निभाउने प्रयास गर्दै गर्दा छत्रेश्वरी गाउँपालिका–६...